Darkmail wuxuu soo daayaa qeexitaankiisa | Laga soo bilaabo Linux
1 Ma waxaad dooneysay kaniiniyada cas ee leh daawada sunta ah? Halkan waxaan kuugu keenayaa iyaga.
2 Iyo sida ay u shaqeyso?
3 Sideese lagu gaaraa?
Ma waxaad dooneysay kaniiniyada cas ee leh daawada sunta ah? Halkan waxaan kuugu keenayaa iyaga.
Sannad iyo badh ka hor Waxaan idhi qofka boosta ahi ma soo diri karo warqadda haddii cinwaanka la siriyay Waqtigaas, Blog-ka Silent Circle (oo xiray adeeggooda email-ka xilligaas) ayaa sharraxay sababta emailku waligiis u noqon doonin mid ammaan ah, waana sababta metadata. Waxaad awoodi doontaa inaad qari karto jirka fariinta, laakiin ma awoodi doontid inaad qortid waxyaabaha sida cinwaanka e-maylka qaataha, maalinta iyo waqtiga loo diray, mawduuca, iwm.
Waxaa laga yaabaa in taasi tahay sababta Isbahaysiga 'Dark Mail Alliance', oo ay aasaaseen Ladar Levison, Michael Janke, Jon Callas, iyo Phil Zimmermann, ay u yidhaahdeen dhammaadkii 2013 in waxay ahayd inaad lacag soo ururiso inaad awood u leedahay inaad ka fikirto borotokool cusub oo emaylka loo diro.
Hadda, waxaa la dhihi karaa waxaa jira kaliya maahan faahfaahin gaar ah (wali ma dhameystirna laakiin waa u furan tahay dadweynaha) laakiin sidoo kale koodh fuliya. Waxaa jira seddex shay: Deegaanka DIME (Muranka Boostada Internetka ee Duurjoogta ah) iyo qawaaniinta DMTP iyo DMAP (oo bedel u noqon lahaa SMTP iyo IMAP).
Iyo sida ay u shaqeyso?
Hagaag, midkoodna luuqada sheyku waa heer sare laakiin qodobbada muhiimka ah waa:
Qabashada furaha otomaatiga ah
Qarsoodi sir ah iyo saxiix
U adkaysiga wax ka qabashada Hanjabaadaha joogtada ah ee joogtada ah
La xiriir amniga lambarka sirta isticmaalaha iyo difaaca dhamaadka
Yaree xogta badan ee la kashifay
Sideese lagu gaaraa?
Matalaadda farriinta waxay ka kooban tahay afar cunsur:
Duubka wax walba duubaya.
Hop-ka soo socda (Next-Hop) oo ay ku jiraan macluumaadka maaraynta gaadiidka (kaas oo ku jira qoraal cad)
Bokhshadda ay ku jirto macluumaadka martida, oo si gooni gooni ah loo xareeyay (martigaliyayaashu waxay arki karaan oo keli ah macluumaadka kuwa ay martida u yihiin, halka qoraaga iyo kan wax qaata ay arki karaan macluumaadka labada martida)
Waxyaabaha ay ku jiraan jirka fariinta, cinwaanada, iyo inta kale ee metadata, ayaa waliba si gooni ah loo xareeyay (kaliya waxaa heli kara qoraaga iyo qofka qaata)
Taa baddalkeeda, DIME waxay ku kalsoon tahay hay'adaha caddeynta, iyagoo kula talin badan isticmaalka DNSSEC (Kordhinta Amniga DNS) ee ansaxinta furayaasha.
Marka laga hadlayo qawaaniinta, DMTP waxay la mid tahay SMTP marka laga reebo in sanduuqa boostada aan lagu darin qayb ka mid ah wadahadalka borotokoolka, iyo sidoo kale cinwaanada emaylka (oo ay tahay in laga soo saaro farriinta sirta ah) iyo in taageerada TLS (maahan sababtoo ah waxaan u isticmaalaa si gaar ah laakiin waxaan ku darayaa amni dheeri ah). Laga soo bilaabo DMAP waxba ma aysan dhigin, marka laga reebo inay iska dhigaan inay la mid tahay IMAP laakiin iyadoon la raadin server-side.
Faahfaahinta sidoo kale waxay ka hadlaysaa waxyaabo kale sida diiwaanka maaraynta DNS, isticmaalka saxeexyada, qaabka farriinta, iyo hanjabaadaha suurtagalka ah ee la maareeyay. Iyo sida cilad macaan, u heellan NSA si loogu dhiirrigeliyo dadaallada oo dhan. Haddii aad xiisaynayso, waad la socon kartaa wax kasta oo gudaha ku jira forumyada darkmail
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Darkmail waxay sii deyneysaa qeexitaankiisa
way ku adag tahay inay ku guuleysato meel ka baxsan jawiyada tacliimeed ee tijaabinta, ama dhanka amniga, waxay ka dhigeysaa mid sahlan ...
Ilaa iyo inta Microsoft, Google ama Yahoo qaadanaynin borotokoolkan, way adagtahay in darkmail lagu guuleysto, maadaama in ka badan 90% dadka ay akoon email ah ku leeyihiin shirkadahaas.
Waxaan durba arkay kiis dhab ah: «ok, email ii soo dir ... ahhh waan illaaway, laakiin waa inaad leedahay cinwaan emayl oo leh borotokoolka mugdiga ah si aan u wada hadalno», iyo haddii uusan qofku aqoon badan u lahayn xisaabinta. , waxay kuu eegi doonaan sida cayayaan dhif ah.
Tani waa meel fiican oo laga abuuri karo adeeg cusub, tusaale ahaan, halkaas oo aad labadaba fursado ku leedahay, adoo marka hore weydiinaya, martida soo diraysa, qofka martida loo yahay haddii uu yiri borotokool, laakiin halkii aad weydiin lahayd isticmaaleha haddii ay doonayaan inay diraan hab "amni la'aan" ah.
Ma jiraa qof bulshada ka mid ah oo is qortay?
dhab ahaan, qeexitaanku wuxuu ka hadlayaa 4 qaab ee serverka: dhaxalka, tijaabada, isku dhafan iyo adag, oo ku saleysan qaababka serverka isha iyo meesha loo socdo, waxaad go'aansaneysaa inaad dirto adoo adeegsanaya DMTP ama SMTP.
Aad bay u xiiso badnaan laheyd haddii hab maamuuskan la hirgaliyo. Arrin kale ayaa ah in ay qaateen shirkadaha kor ku xusan.
U oggolow isticmaaleyaasha kale inay galaan koontada Gmail
Maamul Taariikhda Wadahadalka ee Gmail